ज्यूरिख - रेस्टुरेन्ट
यदि तपाईं यात्रा नगरी यो गर्न सक्नुहुन्न भने, यो बिना खाना बिना। ज्यूरिखमा तपाईंले केहि हेर्न सक्नुहुनेछ , तर चाँडै वा पछि तपाईंले भोकाउनु हुनेछ। र त्यसपछि तपाई कुन रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्न रोज्नु हुन्छ। आखिर, यस सुन्दर स्विस शहरको सडकमा, त्यहाँ पर्याप्त भन्दा धेरै छन्। ज्यूरिखमा सर्वश्रेष्ठ रेष्टुरेन्टहरूको सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्, जुन तपाईंको ग्यास्ट्रोनोमिक स्वादको उत्तम सन्तुष्टिको लागि तुरुन्तै स्थान निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईंले राम्ररी खाएको स्थानहरू
शहर वरपर हिड्ने, उत्कृष्ट सेवा र स्वादिष्ट र फरक मेनुको कारण उल्लेखनीय योग्यताका निम्न खानपान प्रतिष्ठानहरूको समन्वयहरू भण्डार गर्नुहोस्:
"क्रोनहालेले" । यो केवल ज्यूरिखमा मात्र होइन, तर स्विट्जरल्याण्डमा सबै भन्दा सम्माननीय र कुलीन रेस्टुरेन्टहरू मध्ये एक हो। आफ्नो पीतलमा हेर्दै, तपाईं केवल शारीरिक, तर पनि बौद्धिक भूख को संतुष्ट गर्न सक्नुहुन्न: कोठाको पर्खालहरू चित्रकारहरूको साथमा महान कलाकारहरू मिरो, च्यागल र ब्र्रे द्वारा सजाइएका छन्। हामी तपाइँलाई सल्लाह दिन्छ कि स्थानीय पाक कृतिको टुक्रा - ज्यूरिखमा कटेको वेल, सेतो वाइन र क्रीमको चिसो संग अनुभवी। यो आलु रशीशी संग सेवा गरिनु पर्छ। यदि तपाइँले भेने-गैलेन नुस्खाको अनुसार तयार भएको वेनिन्ज स्किस्सेल वा फ्राइड साउसेजहरूको प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाई निश्चित रूपमा कम्तिमा एक पटक यस संस्थामा फर्कन चाहानुहुन्छ। यहाँ एक पारंपरिक मिठाई चकलेट mousse छ। क्रोरोनहाल बार एक साँझ भगवान्को लागि एक उत्कृष्ट स्थान हो: यहाँ अल्कोहल पेयको राम्रो छनौट हो, जसको साथ आरामदायक संगीत पुरा हुन्छ। Melomanov निश्चित रूप देखि प्रसन्न हुनेछ कि यहाँ अक्सर हस्तियाँ पनि प्रदर्शन गर्दछ।
ठेगाना: Raemistrasse 4, ज्यूरिख 8001, स्विट्जरल्याण्ड
फोन: +41 (0) 44 262 9900
कार्य समय: दैनिक 12.00 देखि 0.00 सम्म
"अल्पेप्रोस" (अल्पेप्रोस)। स्विट्जरल्याण्डमा यो सानो तर आरामदायक प्रतिष्ठान कला नोवो शैलीमा अन्तर्क्रियाको साथ प्रभावित हुन्छ। यसको मुख्य सुविधा एक पूर्ण मासिक मेनु अपडेट हो, जुन देश को सबै कोन्टन्स भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु को अनुसार तैयार बर्तन समावेश गर्दछ। त्यसैले, स्विस खाना पकाउने परम्पराहरू संग परिचित हुनुको लागि यो उत्कृष्ट ठाउँ हो जुन जहाँ ज्यूरिखमा कटिलो वेलाको रूपमा तयार पारिएको हुन्छ र क्युफुना - ग्रिसनबाट नाजुक भर्नका साथ पात बीटबाट लिफ्टहरू।
ठेगाना: Fabrikstr। 12, ज्यूरिख, स्विट्जरल्याण्ड
फोन: +41 044 2713919
कार्यको घण्टा: बुधबार देखि शुक्रबार 11.00 देखि 0.00 सम्म, शनिवार देखि 18.15 देखि 0.00 सम्म, आइतबार 18.15 देखि 23.00 सम्म
वोल्कसहरू। यदि तपाईं ज्यूरिखको सबैभन्दा लोकप्रिय नागरिकको एक भन्दा राम्रो आँखा देख्न चाहानुहुन्छ, यहाँ यो वा दिनको समय तपाईं तिनीहरूलाई उच्च सम्भाव्यतासँग भेट्न सक्नुहुन्छ। तर केवल दिमागको लागि पेटको लागि खानाको बारेमा नबिर्सनुहोस्। यो पीतल पारंपरिक फ्रांसीसी व्यञ्जन मा माहिर छ, र सम्मानजनक यो क्लासिक कालो कमरकोट र सुरुचिपूर्ण सफेद aprons मा वेटर्रेस मा ठोस वेटरहरु लाई प्रदान गर्दछ। यहाँ सेवा सबै भन्दा छिटो बोलाउन सकिदैन, तर रेस्टुरेन्टले तातो बनाउने आदेश, आलु सलाद वा एक ग्रील्ड लिभरको मासुको साथमा माटो कालो र हरियो सलाद च्याटहरूमा सेवा पुर्याएको छ। त्यहाँ प्रसिद्ध Langstrasse नजिकै एक रेस्टुरेन्ट हो।
ठेगाना: स्टाउफैफर्स्ट्रास्स 60, ज्यूरिख 8004, स्विट्जरल्याण्ड
फोन: +41 0442421155
कार्यको घण्टा: दैनिक 11:30 देखि 0.00 सम्म
"जोसेफ" (जोसेफ)। यो ज्यूरिखमा सबैभन्दा फैशनेबल रेस्टुरेन्टहरू मध्ये एक हो, त्यसैले तपाईं जहाँपनि त्यस्ता वातावरण भेट्टाउन सक्नुहुन्न। स्थानीय शेफहरूले व्यंजनको क्लासिकिकल अनुक्रमलाई अस्वीकार गर्छन्, जब तिनीहरू पहिले स्न्याक सेवा गर्छन्, त्यसपछि मुख्य पाठ्यक्रम र अन्तमा मिठाईमा। यही कारणले "जोसफ" को मेनु अनियमित छ, जसलाई स्थानीय भोजनको साथमा स्वादिष्ट रूपमा धेरैजसो स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू, साथै इटालियन र एशियन। यदि तपाइँ सबै प्रयास गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने यो आश्चर्यचकित छैन: उदाहरणका लागि, आगन्तुक राम्रो तरिकाले मिठाई र बिरुवाको साथ सुरू गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि स्न्यार्डको व्यवस्था गर्नुहोस् र पहिलो डिश र कफीको साथ दोहोरो खाना समाप्त गर्नुहोस्। रेस्टुरेन्ट मा शराब पीने देखि, पुरुषहरु लाई बियर को कोशिश गर्नु पर्छ, र केटीहरु लाई एक विशेष ककटेल संग आ जाएगा, जसमा वोडा को जैविक रूप देखि बुजुर्ग को रस र चूने संग संयुक्त हुन्छ। हिड्ने दूरीमा सस्ती होटलहरू छन् , जहाँ तपाईं रमाउन सक्नुहुन्छ।
ठेगाना: Gasometerstrasse 24, ज्यूरिख 8005, स्विट्जरल्याण्ड;
फोन: +41 044 271 65 95;
खुल्ला घण्टा: सोमबार देखि बुधवार 11.30 देखि 14.00 सम्म र 17.00 देखि 1.00 सम्म बृहस्पतिवार र शुक्रवार देखि 11.30 देखि 14.00 र 17.00 देखि 2.00 सम्म शनिबार देखि 17.00 देखि 2.00 सम्म आइतबार आइतबार।
"Forderer Sternen Grill" (Vorderer Sternen Grill)। यदि तपाईं सुकेको साउरेजहरू खाना खान चाहनुहुन्छ भने, यहाँ जानुहोस्। यहाँ तपाईंले यो प्रतीततापूर्ण डिशको विविध प्रकारको विविधता पाउनुहुनेछ। रेस्टुरेन्ट ओपेरा हाउस र बेल्लेव्यू स्क्वायर को बीच स्थित छ। चाँडो आउनुहोस्: तलाका साउजेसनहरूको लागि, प्रत्येक मध्ये एक कोमल रोलमा राखिएको छ र सरसफाइको साथ छिराइएको छ, सबैभन्दा वास्तविक रेखा बनाइन्छ।
ठेगाना: Theaterstrasse 22, ज्यूरिख 8001, स्विट्जरल्याण्ड
फोन: ++ 41 43 268 20 80
कार्यको घण्टा: सोमबार-बिहीबार 11.30-23.45, शुक्रबार-शनिबार 11.30-01.30, आइतवार 11.30-23.00
"बोड्डगा" (बोड्डगा)। यस रेस्टुरेन्टमा ज्यूरिखका सबै बोहेमियनहरू इकट्ठा गर्न मनपर्छ: कलाकारहरू, अभिनेताहरू, विद्यार्थीहरू, त्यसैले यहाँ तपाईं राजनीति, रचनात्मकता र दर्शनबारे रोचक छलफलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपयुक्त कुराकानीको लागि सर्वोत्तम राष्ट्रिय स्पेनिश एपसेटकर्ता सर्टज, एक गिलास रातो दाखरस संग, जुन तपाईलाई यहाँ प्रस्तावित गरिनेछ। भवनको पहिलो तल्लामा साला मोर्सिका हॉल हो। यो रूखको साथ सजाएको छ, र मेनुमा आईबरियन प्रायद्वीपबाट उत्पन्न हुने वास्तविक बर्तन समावेश गर्दछ, जस्तै किम चोप्स, पाल्ला र हर्जेजुएला।
ठेगाना: Munstergasse 15, ज्यूरिख 8001, स्विट्जरल्याण्ड
फोन: +41 044 251 23 10
कार्यरत समय: दैनिक 10.00 देखि 0.00 सम्म
"Berengasse" (Barengasse)। शाकाहारीहरू यहाँ राम्रो देखिन्छन् भन्दा देखाउन सकिँदैन: तिनीहरू मुख्यतया मासुको भाँडा पकाउँछिन्, र त्यसो गर्दा तपाइँ आफ्नो औंलाहरु चाँहिदिन्छ। रेस्टुरेन्टको हस्ताक्षर व्यञ्जनबाट, तातो, एबरडीन-एङ्गस मासु, ग्रील्ड फ्लेट, इन्ट्रेकोट सबै यति स्वादिष्ट हुन्छन् कि तपाई निश्चित रूपमा एक थप गर्न क्रमबद्ध गर्न चाहानुहुन्छ। संस्थामा मासु सधैं ताजा, निविदा र रसदार छ, किनभने यहाँ यो सिधै रिमोट अर्जेन्टिनायन भाग्य ओजो दे अगुआबाट छुट्याइएको छ, जहाँ कार्बनिक खेती गरिन्छ। मेनुमा अन्य व्यञ्जनहरू छन्। विशेष गरी रेस्टुरेन्ट र धूम्रपान गर्न चाहने मालिकहरु को हेरविचार गर्नुहोस्: एक विशेष धूम्रपान कक्ष "Davidoff" हो, जसमा तपाईं सर्दियों मा आरामदायक आराम को लागि नरम कालीहरु र न्यानो को मांग गर्न सक्छन्।
ठेगाना: Bahnhofstrasse 25 / Bärengasse CH - 8001 ज्यूरिख
फोन: +41 (44) 210 08 08
खुल्ला घण्टा: सोमबार - शुक्रबार 11.30-14.00, 18.30-22.00, शनिबार 11.30-15.00, 18.30-22.00
भोजनालय 313 । ज्यूरिख मा यो सबैभन्दा प्रसिद्ध रूसी रेस्टोरेंट मा, मेनू मा स्लाविक र यूरोपीय व्यञ्जन को सबै भन्दा प्रसिद्ध व्यंजन शामिल छ। तिनीहरूमध्ये रातो माछा र रातो रौतहट, मशरूम र चिकन जुलियनी, फल सलाद, डेसर्ट कूप रोमोनोफ, डेनमार्क, बान्सेन्सप्लिट, पर्ममेनी, गोभी रोलहरू, चिकन स्किर्सहरू, बीफ स्टव, भिनिगुरेन्ट र धेरै पेनकेकहरू छन्। तिनीहरू केवल ताजा उत्पादनबाट तयार छन्, को गुणवत्ता सावधानीपूर्वक अनुगमन गरिन्छ। मुख्य रेस्टुरेन्ट हॉल को अतिरिक्त, एक बार, एक गर्मी को छत र सर्दियों को बगैचा छत छ।
ठेगाना: Birmensdorferstrasse 313, 8055 ज्यूरिख, स्विट्जरल्याण्ड
फोन: +41 79 70918 86
कार्यको समय: सोमबार देखि शुक्रवार देखि 11.30 देखि 14.00 सम्म र 17.00 देखि 0.00 सम्म, शनिबार देखि 17.00 देखि 0.00 सम्म
1 दिनको लागि बर्नमा के देख्नुहुन्छ?
ज्यूरिख - आकर्षण
लजनेस, स्विट्जरल्याण्ड मा होटल
बर्न - आकर्षण
चर्च को सेंट एंथनी
घरपरिवारको लागि सस्तो र मूलतः के गर्न दिनुहुन्छ?
पुरातन रूसका देवताहरू
आफ्नै हातले सुई
एश्ले ग्राहमले आफ्नो आमासँग समुद्र तट फोटो लिंडा बस नेट ब्लिउड गरे!
पागलको साथ पाई - स्वादिष्ट भित्री व्यञ्जनहरु संग मूल भरण
ब्राड पिट उनको जवानमा
घरको लागि स्वाद
भूमध्य भोजन - हप्ताको लागि मेनु
पेटुनिया बिरुवा कसरी विकास गर्ने?
कोर्न तालिका र अलमारियों र दराज संग
क्रीम-सूपले काली मिर्चबाट बनाएको
आहारमा के तपाईं खाना खाउनुहुन्छ?
वृश्चिक मानिस कसरी राख्नुहुन्छ?
अन्जानमा के भिटामिनहरू छन्?
अनुहारको लागि प्राकृतिक पत्थर
ग्याँस BBQ ग्रिल
एर आवेदन को रूट
सिल्क ओवरले 2013
संख्याको जादू भक्ति छ
कसरी शर्टलाई स्टार्ट गर्न?